Sida loo raaco cuntada jilicsan ee caloosha ku dhaca | Ragga Stylish
Ma ogtahay waxa cuntada jilicsan ee caloosha ku dhaca ay ka kooban tahay? Maaddaama ay aad u badan tahay, Way ku fiicantahay qof walba inuu ogaado sida diirada loo saaro cunnadiisa inta lagu jiro caloosha si looga hortago in xaaladdu ka sii darto oo dhakhso loo soo kabsado.
Ogow calaamadaha cudurka caloosha, waa maxay cuntada jilicsan iyo wixii ka sarreeya Cunnooyinka la oggol yahay iyo kuwa ugu fiican ee laga fogaado markii aad la xanuunsaneyso cudurkaan.
1 Calaamadaha cudurka caloosha
2 Waa maxay cuntada jilicsan?
3 Cunnooyinka loo oggol yahay cunto jilicsan ee caloosha
3.1 Biyo qabow
4 Alimentos looma ogolaado
Calaamadaha cudurka caloosha
Gastroenteritis wuxuu keenaa caabuq caloosha iyo mindhicirada. Taasi waxay sababi kartaa calool xanuun, lallabbo, matag, shuban, madax xanuun iyo qandho. Astaamuhu badanaa waxay ku baaba'aan toddobaad gudihiis. Haddii kale, ballan ka sameyso dhakhtarkaaga sida ugu dhakhsaha badan. Si kastaba ha noqotee, waa inaad is dejiso, maadaama uu yahay cudur fudud.
Maxaynu u leenahay calool majiirka? Ma jirto sabab keliya, laakiin waxaa jira dhowr waxyaalood oo sababi kara, oo ay ka mid yihiin bakteeriya, fayras, dulin, iyo cuntooyinka qaarkood. Cadaadisku sidoo kale wuxuu u horseedi karaa calool xanuun.
Waa maxay cuntada jilicsan?
Cunto jilicsan ayaa fududeyn karta astaamaha gaas-mareenka waxayna jirka ka caawin kartaa inuu si fiican u haysto cuntada.. Cunto jilicsan ayaa lagu gartaa dufanka fiber-ka oo hooseeya. Sidoo kale, sida magaceeda ka muuqata, waxay ku lug leedahay cunista cuntooyinka jilicsan. Mar dambe, waan arki doonaa waxa ay yihiin cuntooyinkan, iyo sidoo kale kuwa lagula taliyay in laga fogaado.
Cunnooyinka loo yaqaan 'Bland' waxaa loo isticmaalaa xaaladaha ay lagama maarmaanka u tahay yareynta culeyska shaqada ee habka dheef-shiidka. Cudurka 'Gastroenteritis' waa mid ka mid ah xaaladaha u baahan in la qaato cunno jilicsan. Laakiin sidoo kale waxay ka caawisaa daweynta cudurada kale, oo ay ku jiraan cilladda mindhicirka xanaaqa iyo diverticulitis.
Qaabkan cunnada loogu dhowaado maahan weligiis, laakiin waa in si ku meelgaar ah loo isticmaalo ilaa nidaamka dheef-shiidka uu diyaar u yahay inuu si caadi ah mar kale u shaqeeyo. Laguguma talin karo inaad sii haysatid in ka badan intii loo baahnaa, maadaama aysan bixinayn dhammaan nafaqooyinka jidhku u baahan yahay inuu ku fuliyo shaqooyinkiisa. Dhakhtarkaaga ayaa kula socodsiin doona goorta aad ku noqonayso cuntadaadii caadiga ahayd. Guud ahaan, cuntada jilicsan ee loo yaqaan 'gastroenteritis' waxaa la ilaaliyaa oo keliya dhowr maalmood.
Ugu dambeyntii Waxaa lagugula talinayaa inaad raacdo cuntada nasashada jilicsan. Sida howlaha kale, jirkaaga wuxuu qadarin doonaa awoodda uu diiradda u saari karo oo keliya soo kabashada.
Cunnooyinka loo oggol yahay cunto jilicsan ee caloosha
Naqshadaynta qorshe cunid maalmo kooban si looga adkaado calool mareenka? Kudar cuntooyinka soo socda si aad u hubiso inaad hesho dheecaanno kugu filan, kalooriyada, macdanaha lagama maarmaanka ah, iyo nafaqooyinka kale ee jirkaagu u baahan yahay labadaba inay ahaadaan kuwo xoogan oo soo kabsada.
Casiirka (tufaax iyo cinabku waa xulashooyin aad u fiican)
Baradho la kariyey)
Ukunta adag-la kariyey)
Faleebada (kafee la'aan): Tixgeli basbaaska, faleebo taas oo, marka lagu daro buuxinta dareerayaasha, ay sidoo kale kaa caawin karto yareynta lallabbada. Sanjabiilku sidoo kale waa shey wanaagsan oo loogu talagalay shaaha cuntada fudud.
Digaag iyo turkey oo aan maqaar lahayn (sharad hababka karinta caafimaadka leh)
Maraq digaag: Waxay ka caawisaa ka hortagga fuuqbaxa, iyo sidoo kale inay dib u buuxiso electrolytes ku lumay shuban iyo matag.
Haddii jirkaaga ay ka muuqato calaamado aan diyaar u ahayn cunnooyinka adag ee liiska ku jira, diirada saar oo keliya cabitaannada illaa waqtigaas. Sida adag ee liiska ku jira, cuntada jilicsan uma muuqato inay tahay mid aad u kala duwan, laakiin haddii aad ku darto qaar ka mid ah waxaad heli kartaa cuntooyin nafaqo leh oo quraac, qado iyo casho ah. Xusuusnowna inay tahay ku meel gaar. Maalmo yar gudahood, waxaad awoodi doontaa inaad dib ugu noqoto cunnooyinka aad jeceshahay.
Markaad qabtid gastroenteritis, halista fuuqbaxu wuu sii kordhaa maxaa yeelay jirku wuxuu ku lumiyaa dheecaan fara badan shuban iyo matag. Fuuqbax ayaa xaalada ka sii dari kara, sidaa darteed cabitaanka biyaha iyo dareerayaasha kale ee liiska kor ku xusan waxay muhiim u yihiin cuntooyinka caloosha ku jira ee caloosha ku jira. Dareerayaasha lumay waa in la beddelaa.
Harraad aad u daran, kaadi madow, daal, iyo jahwareer ayaa ka mid ah calaamadaha fuuqbaxa. Haddii jirkaaga uu muujiyo mid ka mid ah astaamahan inta lagu jiro cudurka caloosha, isla markaaba fuuq bax. Tixgeli cabitaan isboorti, maraq ama casiir ... waligaa qaxwo ama cabitaanno aalkolo leh ama caano.
Alimentos looma ogolaado
Ogaanshaha cuntooyinka aan loo oggoleyn cuntada jilicsan ee loo yaqaan 'gastroenteritis' sidoo kale aad ayey muhiim u tahay marka aad dejineyso qorshe cunid kaa caawineysa inaad ka soo kabato sida ugu dhakhsaha badan.
Waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato cuntooyinka hodanka ku ah sonkorta iyo dufanka, iyo sidoo kale kafeinka, aalkolada iyo caanaha. Waad ku dari kartaa iyaga cuntadaada markii aad fiicnaato. Aynu eegno cuntooyinka ay tahay in looga tago cuntada caloosha ku jirta ee qanjidhada maxaa yeelay waxay kaa sii dari karaan inaad ka sii xumaato:
Caanaha (iyo waxyaabaha kale ee caanaha laga sameeyo)
Digir iyo lows
Isteroberiga (buluuga, miro guduud, miro guduud ...)
Cabitaano kaarboonku ku badan yahay
Qaxwaha (iyo cabbitaannada kale ee kafeega leh)
Beer, khamri iyo cabitaanno kale oo aalkolo leh
Cunnooyinka basbaaska leh
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cunto jilicsan oo loogu talagalay caloosha